इशान कन्ट्रक्सनको लापरबाहीः ६ वर्षमा पनि बनेन महादेवस्थानको पुल
रड, सिमेन्ट, गिटी र बालुवाको पनि उधारो तिरेनन्
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । पृथ्वीराजमार्गसँगै जोडिएको थाक्रेस्थित महादेव खोलामा २५ मिटर लम्बाइको मोटरेबल पुल निर्माण गर्न इशान कन्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको ६ वर्ष नाघिसक्दा पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन ।
डिभिजन सडकसँग १ करोड ५२ लाख ७ हजार २ सय २६ रुपैयाँ ६७ पैसामा ठेक्का लिएका थिए । निर्माण ठेक्का लिने ठेकेदार अर्जुन सिम्खडा र केशव अर्यालले मोटरेबल पुल बनाउन पसलबाट लिएको रड, सिमेन्ट, बालुवाको उधारोसमेत तिरेका छैनन् ।
सम्झौताअनुसार पुल २०७० असार २१ गते नै निर्माण सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने थियो । पुल निर्माण भए थाक्रे, गल्छी तथा नुवाकोट कुमरितर्फका कृषि क्षेत्रका स्थानीयले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् ।
मलेखुकाे सडक मर्मत पनि प्रभावित
पृथ्वीराजमार्गसँगै जोडिएको मलेखु भण्डारा ठोरी सडक निर्माण तथा मर्मत गर्न २०६९ साल चैत ३० मा २ खण्डका लागि १ करोड ३२ लाख १ हजार २ सय ४७ रुपियाँमा सम्झौता गरी २०७० मंसिर ३० मा योजना सम्पन्न गर्ने सर्त थियो । तर उक्त कार्य पनि अहिले अधुरै अवस्थामा छाडिएको छ ।
निर्माण सम्झौता गर्ने आजीवन न्यु तीनकन्या जेभी कम्पनी भुवन त्रिपाठीको हो । उनी हाल बेनीघाट रोरा वडा नं ३ का वडाअध्यक्ष हुन् ।
चीनको केरुङदेखि गल्छी–मलेखु–चितवन हँुदै भारतको सीमाक्षेत्र ठोरी जोड्ने सबैभन्दा छोटो चेपाङमार्ग पनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
१० किलोमिटर सडक पिच गर्न १० करोडमा ठेक्का लिएको शारदा निर्माण सेवाले हालै एक वर्षको पुनः म्याद थपेको छ । सबै निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने पृथ्वीराजमार्ग र आसपासका अन्य ग्रामीण सडकसमेत ठेकेदारहरु निर्माणमा हेलचेक्रयाइँ गरेका हुन् ।
गृहमा पुग्यो समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको नामावली
वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीको नाम सूची गृह मन्त्रालयमा पठाएर स्थानीय प्रशाासन पन्छिएको छ ।
जिल्लामा २०६८ सालमै योजना सम्झौता गरी हालसम्म पनि सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी खुलेआम घुमिरहेका छन् ।
ठेक्का दिने निकायले रुग्ण योजना भन्दै कालोसूचीमा राखेका २५ निर्माण कम्पनीका ३७ व्यवसायीको नाम आवश्यक कारबाहीको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
शुक्रबार २५, जेठ ०७५
नेपालीको जापान सपना हुने भयो पूराः नेपाल–जापानबीच यस्तो भयो समझदारी
कर्णालीमै पहिलो पटक खानेपानी बिमा !
धनगढी–अत्तरिया सडकको चक्काजाम खुलेको केहि समयमै फेरी सडक अवरुद्ध
पक्की पुल निर्माण कार्य ठप्प, सहयोगको खोजीमा
आयो राजेन्द्र थापाको ‘फिर्ता चाहियो’
५० कार्यपत्र सहित तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत संगोष्ठी सम्पन्नः अर्काे वर्ष पनि हुँदैछ यस्तै सम्मेलन ?
पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरुले पत्याएनन् प्राधिकरणको कुरोः ‘हेपेको’ भन्दै १० गते सिएलपिआयु घेर्ने यस्तो छ तयारी